Iindaba-Intlanganiso yoKhuseleko loMsebenzi
Ngo-Mar. 1, 2020 iJitai Electronics Co., Ltd yabamba intlanganiso yokhuseleko lomsebenzi ngoveliso lwemveliso ukwenza isicwangciso solungiselelo lwalo nyaka kukhuseleko lomsebenzi.
Amalungiselelo okhuseleko emsebenzini ngo-2020
Ukusuka ngoMatshi 1, 2020 ukuya kuDisemba 31, 2020 kukho amanqanaba amathathu:
Inqanaba lokuqala: nge-1 kaMatshi ukuya kuMatshi 31, bonke abasebenzi abavela kuwo onke amasebe baye bafunda ukuhambisa "iprojekthi esebenzayo yohlengahlengiso olukhethekileyo lomsebenzi wokhuseleko" ngokuhlanganisa kunye nokuphucula isazela semingcipheko yokuchazwa kunye nokuchaphazela i-atomosphere elungileyo yolungiso olukhethekileyo. Onke amasebe aqhubela phambili ekunciphiseni nasekufezekiseni imixholo kwiprojekthi yezilungiso ezizodwa, abuphakamise ngokupheleleyo ubungakanani besixhobo kunye nesibonelelo kwisebe lakhe kunye nenqanaba lokusetyenziswa kuqinisekisa ubungozi obunokubakho bokungqinwa ngaphandle kwecala elingaboniyo, indawo efileyo kunye nokungahambi kwimisebenzi.
Inqanaba lesibini: Epreli 1 ukuya kuSeptemba 30, onke amasebe ajongene nokujolisa kugxile kubasebenzi abaphambili, amanqaku aphambili kunye namakhonkco aphambili kwaye aqhuba ngokugubungela ukuqhuba kwewebhu. Ukusekwa kukhuseleko lwangaphambili lwangaphambi kokusebenza lisebenza kuwo onke amasebe ngokobungakanani benombolo yesiseko esiyingozi kunye nenqanaba lokhuseleko kuwo onke amasebe kunye nokuthotyelwa koxanduva lwawo onke amanqanaba kunye nokuthatha amanyathelo abalulekileyo kulungiso olupheleleyo kunye nokuqinisekisa yonke imingcipheko enokubakho inciphisiwe kwaye imilinganiselo iphantsi yaza yalawulwa ngokugqibeleleyo.
Inqanaba le-Thrid: Okt-1 ukuya ku-Disemba 31, onke amasebe kufuneka asekele kuwo onke amasebe anoxanduva kunye nezilungiso ezizodwa ekuphuculeni ngakumbi nasekudibaniseni iziphumo zolungiso olukhethekileyo.
1. Ukuqinisa ulawulo, ukucacisa uxanduva, ukukhulisa ukulungiswa. Umphathi jikelele, umphathi, umphathi weqela lomsebenzi, inkokeli yeqela kunye nabo bonke abasebenzi kufuneka banikele ingqalelo kulungelelwaniso lwemingcipheko enokubakho ekuqinisekisweni kukhuseleko lomsebenzi. Thatha ngocoselelo uxanduva, ulungelelwaniso olumanyanisiweyo ngokungqongqo kwaye uhlanganise bonke abasebenzi ukuba benze umngcipheko wokuchazwa kwaye banike ingxelo ngemiba efumanekayo kunye neengozi kwinqanaba lokhuseleko lomsebenzi ngokwenqanaba kwaye bahlengahlengise ngokukhawuleza benze ubhaliso kunye nokulandelelwa kwabanye kungalungiswa ngexesha.
2. Ukuqinisa uqeqesho kwezemfundo nolawulo lwentsimi. Ngexesha lokuzihlola kunye nokulungiswa kwemingcipheko, iya kuphumeza ukuqinisa uqeqesho olukhuselekileyo lwezobuchwepheshe kubo bonke abasebenzi kunye nokuphumeza ngokunyanisekileyo inkqubo yoqeqesho lwangaphambi komsebenzi. Iya kuseka imeko yokhuseleko emsebenzini ngokuqeqesha, ukufundisa, ukukhokela umhlaba njalo njalo kwiifom kunye nemiqondiso yokuqinisekisa ukhuseleko, ukukhanya kwezilumkiso zokhuselo, ulwazi malunga nokhuseleko.
3. Ukomeleza ulawulo lwexesha likaxakeka, ukuququzelela ukuzilungiselela okungxamisekileyo. Ukuphucula bonke abasebenzi kumzi-mveliso abajongana nemeko zonxunguphalo nokuzicombulula ngokwabo kunye nokujongana nemimandla eyingozi kwinkampani kunye neenkqubo eziyingozi ziphanda nzulu kwaye zilungise kwaye zihlaziye ukucwangciswa kwangaphambili kokulungiswa kwesilungiso esingxamisekileyo kunye nemimandla ejongene nemimandla okwangoku kulungelelaniswa nokuzilolonga ukucwangciswa kwangaphambili.
Inkampani yethu iya kuthi inyanzelise ngokungathandabuzekiyo "iindlela zoviwo zokufumana umvuzo kunye nesohlwayo kukhuseleko lomsebenzi" kunye neenkqubo ezinxulumene noko. Uya kuvuzwa ngokufezekisa iinjongo zomsebenzi zonyaka. Iyakuphathwa gadalala okanye yohlwaywe isebe okanye abasebenzi ababangele ingozi ngenxa yemingcipheko enokubakho yokuqinisekiswa hayi ngexesha. Iya kuba sisilumkiso esinzulu kwezemfundo kwabo baphula uqeqesho ngexesha kwaye iya kohlwaywa ngokuqatha kwabo bazibophelelayo.